Showing ७१-८० of १४५ items.
धार्मिक र सांस्कृतिक सहिष्णुतासँगै पप कल्चर बनेको तीज
हिन्दू धर्मसँग जोडिएको आध्यात्मिक पर्व तीजको हालको संस्करणले ग्लोवल संस्कृतिको रूप लिएको छ । ग्लोवल भइसकेपछि त्यो संस्कृति वा संस्कार कुनै जाति, धर्म वा सम’दाय विशेषको पेवामा सीमिति हुँदैन । आधादशक अघिसम्म तीज पर्व हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले आफ्नो माइत घर जाने बहाना निकाल्ने गतिलो माध्यमको रूपमा लिने गरेका थिए । तर तीज अब त्यस्तो माइत जाने पर्वको रूपमा रहेन । महिला अधिकार, महिला मुक्तिको आन्दोलन, महिला स्वतन्त्रतासँग तीजलाई जोडेर परिभाषित गर्न थालिएको छ । बहुलवादी समाजमा गैर हिन्दू महिलाहरूले पनि विना हिचकिचाहट मनाउनुको औचित्य प्रस्टिदै छ । चरम लैङ्गिक विभेदलाई समाप्त पार्न सवै वर्ग
प्रकाशित मितिः भदौ १७, २०७६
त्यो बेलाको तीज र यो बेलाको तीज
तीज पर्व सामान्य हर्षोल्लासका निमित्त मनाउने चाड मात्र नभएर यसको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व छ । पूर्वीय वैदिक सनातन धर्म परम्पराका विभिन्न पौराणिक एवम् आध्यात्मिक ग्रन्थहरूमा यसको महिमा उल्लेख गरिएको छ । स्कन्द पुराण र भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन भए अनुसार स्वयं माता पार्वतीले पनि नारी जातिको आफ्नो अनुकूलको योग्य वर छान्न पाउने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा स्थापित गराउन तपस्या (सत्याग्रह र शान्ति पूर्ण आन्दोलन) गरेर आफू अनुकूल वर छानी व्यावहारिक रूपमा समाजमा स्थापित गरेको देखिन्छ । त्यही किम्वदन्ती अनुसार आज हिन्दू महिलाहरू निराहार व्रत बसी श्रद्धापूर्वक शिवको प
उर्लाबारी नगरको द्वन्द्व समाधान गर
देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच मतभिन्नता, राजनीतिक असमझदारी बढेको बेलाबेलामा समाचार आउने गरेका छन् । एउटै पार्टीका प्रमुख उपप्रमुख भएका स्थानीय तहमा समेत खटपटका कथाहरू अखबारहरूमा छापिदैं आएका छन् । झन् भिन्न पार्टीका प्रमुख उपप्रमुख भएका स्थानीय तहमा द्वन्द्व झन् चर्किएको छ । जनताका कामभन्दा पनि आफ्नो दल र निकटका व्यक्तिका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्तिले जनता चुपुवामा परेका छन् । पछिल्लो समय मोरङको उर्लाबारीको प्रमुख उपप्रमुखको द्वन्द्व अदालतमै पुगेको छ । आन्तरिक घर सल्लाह अदालतमै पुगेर स्टे अडर नै जारी हुनु नगरपालिकाका लागि शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन ।गत असार २९ गते भएको चौथो नगरस
प्रकाशित मितिः भदौ १३, २०७६
डेङ्गु नियन्त्रणका लागि खोई सरकारको सक्रियता ?
मुलुकका अधिकांश जिल्लामा डेङ्गुको महामारी देखिएको छ तर सरकार, सरोकारवाला र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुतिरहेका छन् । डेङ्गुु नियन्त्रणका लागि चासो र चिन्ता देखाएका छैनन् । अचम्म त के भने जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएर बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, पदाधिकारीहरू अनभिज्ञ जस्तै देखिएका छन् । तराई हुँदै पहाड चढिरहेको डेङ्गु नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा एक शब्द खर्चिएको सुनिएको छैन । आफ्नो मान्छेलाई कुन मालवाला स्वास्थ्य संस्थामा नियुक्ति गर्न पाइन्छ भन्नेतिर मात्र ध्यान दिँदा डेङ्गुको महामारीमा परेका सर्वसाधारणको बारेमा चिन्ता लिन नसकेको हो कि ? स
प्रकाशित मितिः भदौ १०, २०७६
सन्थाल बालबालिकाको शिक्षामा ध्यान पुर्याऔं
‘विद्यालय शिक्षामा सबैको समतामूलक पहुँच सुनिश्चिता हुने छ । कोही बालबालिका शिक्षाको पँहुचबाट बञ्चित हुने छैनन् ।’– यो सरकारको शिक्षा नीतिमा समावेश भएको विषय हो । त्यसो त सरकारले उसले अख्तियार गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउन वार्षिक विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्छ । भर्ना अभियानमा करोडौं खर्च गरेको छ । बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको तथ्याङ्क पनि अवखारहरूमा आउने गरेका छन् । बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न खाजा कार्यक्रम, पोषण जस्ता कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ । तर सरकारले सञ्चालन गरेका यस्ता कार्यक्रमले सरकारको नीति तथा घोषणालाई घखाउ नपुर्याउनु विडम्बना हो । सरकारले गरेक
प्रकाशित मितिः भदौ ९, २०७६
चाहँदा नहुने के रहेछ ?
‘जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय’ यो आहान नेपाली समाजमा लोकप्रिय छ । भन्नुको तात्पर्य इच्छा गरेमा उपाय अनेक हुन्छन् भन्ने हो । गरे, असम्भव रहेनछ भन्ने प्रमाणित सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–२ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले गरेको छ । जहाँ निःशुल्क ओपिडी सेवा दिइएको छ । नागरिकले पाउने आधारभूत आवश्यकतामध्येको स्वास्थ्य सेवा पनि एक हो । त्यो आवश्यकतालाई त्यहाँको केन्द्रले पूर्ति गरेको छ । चाहँदा नहुने केही रहेनछ भन्ने प्रमाणित स्वास्थ्य केन्द्रका डा. अनिल गिरीले गरेका छन् । देहातवासीलाई त्यो सुविधा प्रदान गर्न उनको इच्छाशक्ति नै काफी रह्यो । जसले आज हेल्थपोष्टबाट स्तरोन्नति गर्दै प्राथ
प्रकाशित मितिः भदौ ६, २०७६